MIUI 11 waxay ku bilaabmaysaa qaabkeeda caalamiga ah Oktoobar 16 | Androidsis
MIUI 11 waa nooca cusub ee lakabka qaabeynta ee taleefannada Xiaomi iyo Redmi. Dhowr toddobaad ka hor ayay shirkaddu ku dhawaaqday inay bilaabayso cusboonaysiintaan tiro aad u badan oo moodooyinkaaga ah. In kasta oo taariikhaha la shaaciyey ay kaliya u ahaayeen noocyada Shiinaha ee koofiyadan cusub. Nasiib wanaag, maahan inaan sugno waqti aad u dheer bilowgeeda caalamiga ah.
Tan iyo markii Xiaomi ay shaacisay goorta aan awoodno sug sugitaanka nooca caalamiga ah ee MIUI 11. War ah in isticmaaleyaasha leh taleefannada nooca Shiinaha ay sugayeen ugu dambayntiina ay rasmi noqotay. Sugitaanku kama sii dheereyn doono adeegsadayaashan.
Shirkadda ayaa taas xaqiijisay Waa Oktoobar 16 markii la sii daayo MIUI 11 qaabkeeda caalamiga ah si rasmi ah. Taariikhdan, nooca caalamiga ah ayaa loo isticmaali doonaa qaar ka mid ah taleefannada Xiaomi. In kastoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn noocyada ugu horreeya ee marin u heli kara.
Su’aal kale ayaa ah in daahfurkaani uu ka dhici doono adduunka oo dhan isla taariikhdaas. ama haddii ay noqon doonto 16-ka Oktoobar marka laga bilaabo suuqyada qaar ka dib markay toddobaadyadu dhammaadaan waxay ku sii ballaadhi doontaa adduunka intiisa kale. Astaantu wali ma cadeyn tan.
Kadibna waa inaan aragnaa usbuuca soo socda sida loo fulinayo hawlgalkan MIUI 11. Nooc cusub oo lakabka ah kaas Waxay naga tagi doontaa warar badan, sida shaashad quful firfircoon ama dhawaaqyo ogeysiis cusub, iyo kuwo kale, sida lagu dhawaaqay dhammaadka Sebtember.
Sidaa darteed, maalmo yar gudahood Daahfurka caalamiga ah ee MIUI 11 ayaa bilaabmi doona. Haddii aad haysatid mid ka mid ah taleefannada Xiaomi iyo Redmi ee la cusbooneysiin doono, markaa waxaad dhawaan u heli doontaa noocgan cusub ee lakabka u-habeynta magaca Shiinaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Nooca caalamiga ah ee MIUI 11 wuxuu leeyahay taariikh sii-deyn ah
Gonzalo Molina Torres dijo
Waad ku mahadsan tahay kooxda Xiaomi dadaalka ay sameeyeen si ay u fuliyaan isbeddelada iyo hagaajinta mobiladayada.
Jawaab Gonzalo Molina Torres